HomeWararka Maanta‘Haddii sidani sii socoto marka Brazil koobka Ha La Iska Siiyo ……..Lovren
Dejan Lovren, laacibkii xulka Croatia ee sababay rigoodhaha xulkiisa dhabarka ka jabiyey habeen hore, ayaa ku cawday in khalad weyn laga gallay , isla markaana ay waajib tahay in qaranka Brazil imika la iska sii gudoon siiyo koobka aduunka ee loo tartamayo.
Kubada rigoodhaha noqotay oo uu garsoorka ku khiyaameeyey weeraryahanka Brazil ee Fred ayaa cadayd inaan cidina taabanin , balse garsoore Yuichi Nishimura oo ciyaarta dhex dhexaadinayay ayaa ku abaal mariyey Brazil in kubadaasi rigoodhe tahay.
Lovren wuxuu ku eedeeyey garsoore Yuichi Nishimura mid xataa aan aqoon u lahayn luqada Ingiriisiga ee uu kula xidhiidhi lahaa ciyaaryahanada , waxaanu ku eedeeyey is faham daro weyn oo ka dhex jirtay garsoorka iyo ciyaaryahanada ciyaartaasi.
‘Laakiin haddii xaalba sidan yahay, marka waa inaynu koobkaba si toos ah u siinaa Brazil.
‘Anigoo kali ah qaadan waa iguma noqon, ee qof kasta oo ciyaarta daawanayay wuu u qaadan waayay. Waxaan u malaynayaa ku dhawaad laba bilyan oo qof. Waa wax laga yaxyaxo. Khalad weyn oo in laga qoomamoodo mudan.’ayuu yidhi Lovren.
Wuxuu intaas ku sii daray: ‘Dabcan waan ka cadhooday. Waan ooyi gaadhay , laakiin maxaan ka qaban karaa? Haddii aad ciyaarta daawanaysay wax kasta indhahaaga ayaad ku arkaysay umana baahnid inaan kuu sharaxo.
‘Garsooraha waxaan weydiiyey, sideed noogu qabatay arintan? Laakiin waxa wax laga xishoodo ahayd , wuxuu iigu jawaabo ayuu garan waayay. Mushkilada kale ee garsooraha haysatayna waxay ahayd , luuqada Ingiriisiga oo aanu ku hadli aqoonin.
‘Waxaa wax laga xumaado ahayd, in aanu aniga iyo qof kale toona ugu sharxi kari waayay Ingiriisi sidii wax u dhaceen. Sidee garsoore koobka aduunka haynayaa uu sidaas oo kale u noqdaa?’
Ivory Coast 1-1 Guinea: Gervinho Oo Casaankii U Horreeyey La Siiyey
Van Gaal: Manchester United Inta Ka Horreysa 2017 ayay Koob Ku Guuelysan Doontaa
Manchester City Oo Ku Guulaysatay Priemier League Iyo Barroortii Liverpool